Site na: KongoLisolona: November 30, 2019 00: 25 Enweghị asịsa
-Kwanye ùgwù onwe onye, ​​nke karịrị akarị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na nlelị nke mmadụ niile na-ata ya ahụhụ.
Nke mbụ bụ usoro echiche igbu onwe onye, ​​nkwenye na ụkpụrụ ịnabata nne na nna gị.
Nke abuo bu ihe puru iche nke ndi nwere otutu ihe anakpo, nke anabatara na ulo akwukwo gi site na obi ojoo na nke ndi nkuzi na ihe ndi ozo dika nyocha oru oru na ule IQ.
Nke ato sitere na nkwenkwe okpukpe na-adịghị mma nke na-emesi echiche nke ikpe ọmụma na erughị eru ike nke ukwuu. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ so na-eme ka mmadụ ghara inwe ùgwù onwe ya, ihe atọ ndị a bụ ihe kacha mkpa.
Dr. Anthony Robert obi uto zuru ezu)
Ọkt31 03: 38